I-Kurtosis yi- statistic echazayo engaziwa njengamanani amanqaku achaza njengento echazayo kunye nokuphambuka okuqhelekileyo . Iinkcukacha ezichazayo zinika ulwazi oluthile malunga nesethi yolwazi okanye ukwabiwa. Njengoko ithetha ukuba umlinganiselo weziko leedethi kunye nokuphambuka okuqhelekileyo ukuba usasaza isethi yedatha, i-kurtosis ngumlinganiselo wobunzima bokusabalalisa.
I-formula ye kurtosis ingaba yinto enzima ukuyisebenzisa, njengoko ibandakanya izibalo eziliqela eziphakathi. Nangona kunjalo, isofthiwe yesantlukwano isantya kakhulu inkqubo yokubala i-kurtosis. Siza kubona indlela yokubala i-kurtosis nge-Excel.
Ngaphambi kokuba sibone indlela yokubala i-kurtosis nge-Excel, siza kuhlola iingcaciso ezimbalwa eziphambili. Ukuba i-kurtosis yokuhambisa iphezulu kunokuba isasazwa ngokuqhelekileyo, ke ine-kurtosis engaphezulu kwaye ibizwa ngokuba yi-leptokurtic. Ukuba ukusabalalisa kune-kurtosis engaphantsi kokusasazeka okuqhelekileyo, ke ine-kurtosis engapheliyo kwaye kuthiwa yi-platykurtic. Ngamanye amaxesha amagama e-kurtosis kunye ne-kurtosis eyongeziweyo asetyenziswa ngokungafaniyo, ngoko qi niqiniseke ukuba uyazi ukuba zeziphi izibalo ozifunayo.
Kurtosis kwi Excel
Ngaphandle kwe-Excel kunqamle ukubala i-kurtosis. Ukwenza amanyathelo alandelayo uhlenga inkqubo yokusebenzisa ifom eboniswe ngasentla.
Umsebenzi we-kurtosis we-Excel ubala i-kurtosis engaphezulu.
Faka ixabiso lamanani kwiiseli.
Kwindlela entsha yeseli = KURT (
Gqamisa iiseli apho idatha ikhona khona. Okanye uthayiphe uluhlu lweeseli eziqulethe idatha.
Qinisekisa ukuvala abazali ngabafakela ngokubhala)
Emva koko cofa iqhosha lokungena.
Ixabiso kwiseli yi-kurtosis engaphezulu kwesethi yedatha.
Kwimijelo yedatha encinci, kukho esinye isicwangciso esiya kusebenza:
Kuhlobo olungenanto lweseli = KURT (
Faka ixabiso leenkcukacha, ngamnye ohlukaniswe yi-comma.
Vala a bazali)
Cinezela ukhiye wokungena.
Le ndlela ayikhethwayo njengokuba idatha ifihliwe ngaphakathi komsebenzi, kwaye asikwazi ukwenza ezinye izibalo, ezifana nokuphambukiswa okuqhelekileyo okanye ukuthetha, kunye nedatha esiyifakile.
Kwakhona kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-Excel iyanqunyanyiswa yimali yedatha eyenziwa ngu-kurtosis, i-KURT, inokusingatha. Inani elona likhulu lamanani eedatha angasetyenziswa kunye nalo msebenzi ngu-255.
Ngenxa yokuba umsebenzi uqulethe ubuninzi ( n- 1), ( n- 2) kunye ( n- 3) kwi-fraction yeqhezu, kufuneka sibe neenkcukacha zedatha ubuncinane ukuze sisebenzise le Umsebenzi we-Excel. Iiseti zeenkcukacha zesayizi 1, 2 okanye 3, siya kuba nesahlulo ngephutha lezero. Siphinde sibe ne-standard standard deviation for the purpose of avoiding the division by error.
10 I-Best Krusty i-Clown Episodes
Ngaba kufuneka ndisebenzise i-Acrylic okanye i-Paint ye-oyile?
Ngaba Ufanele uthathe zombini i-SAT ne-ACT?
Udliwano-ndlebe: Mandy Moore ukususela kwi "A Walk to Remember"
URory Gallagher I-Album Yokuthenga Isikhokelo